HST Medical - ပိုမြင့်၊ ပိုအားကောင်း၊ အတူတူ
HST Medical - ကမ္ဘာအတွက် အမှန်တကယ် စင်ကာပူအမှတ်တံဆိပ်
ပြည့်စုံသောအကွာအဝေးဖြင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့် ဝယ်ယူလိုက်ပါ။ HST Medical Heritage® TCM ဖြည့်စွက်စာနှင့် Nature Essentials® ဗီတာမင်နှင့် ဖြည့်စွက်စာများ အပါအဝင် ဗီတာမင်နှင့် ဖြည့်စွက်စာများ။ ငါတို့ကမ္ဘာကျော်ဝယ် Rheuma-Salve® အနာသက်သာဆေး၊ Cough Alievaid, Zoo-Vite ကလေးဗီတာမင်၊ပုလဲမှုန့်၊ CurQmaxနှင့် အခြားများစွာ
HST Medical ထုတ်ကုန်များ - ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသို့ ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
သင်သည် စင်္ကာပူ၊ မလေးရှား၊ ဗီယက်နမ်၊ ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ထိုင်ဝမ်၊ ဟောင်ကောင်၊ တရုတ်၊ ဂျပန်၊ တောင်ကိုးရီးယား၊ ဥရောပသမဂ္ဂ (EU) သို့မဟုတ် အမေရိကတိုက်တွင်ဖြစ်စေ ပြဿနာမရှိပါ။ အိမ်မှာ အိပ်ပါ ဒါမှမဟုတ် ရုံးမှာ အနားယူပါ ဒါမှမဟုတ် သင့်စမတ်ဖုန်းကနေတစ်ဆင့် လှိမ့်ကြည့်ကာ အခုပဲ သက်တောင့်သက်သာ စျေးဝယ်လိုက်ပါ။
[E-STORE ဖောက်သည်များအားလုံးအတွက် အရေးကြီးသောသတိပေးချက်များ]
1 ခုနှစ် ဩဂုတ်လ 2021 ရက်နေ့မှ စတင်၍ အကျိုးသက်ရောက်သော အင်ဒိုနီးရှားအခွန် ID နံပါတ် သို့မဟုတ် NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) သည် ယခုအခါ သွင်းကုန်နှင့် တင်ပို့ရောင်းချမှုအတွက် မဖြစ်မနေ လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းသည် လုပ်ငန်းများနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ တင်ပို့မှု နှစ်ခုလုံးအတွက် အကျုံးဝင်ပါသည်။
EU (ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်း) ပို့ဆောင်ရေးလိပ်စာများအတွက်၊ လက်ခံသူသည် ၎င်းကို ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း သေချာပါစေ။ သန့်ရှင်းရေးလိုင်စင် သင့်ဒေသဆိုင်ရာဥပဒေ လိုအပ်ချက်အရ။ လိုင်စင်မရှိခြင်းကြောင့် သင့်ပါဆယ်ထုပ်ကို သင့်ဒေသအကောက်ခွန်မှ ပယ်ချပြီး နောက်ဆုံးတွင် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပြန်လည်ပေးပို့ပါက ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ပို့ဆောင်ခများအတွက် သင့်တွင် တာဝန်ရှိပါမည်။
တရုတ်အကောက်ခွန်မှသတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း၊ မှာယူမှုစုစုပေါင်းတန်ဖိုးသည် ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုသူများအတွက် တရုတ်ယွမ် ၁၀၀၀ ထက်မပိုသင့်ပါ။
လက်ရှိ COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့်၊ ကုန်စည်ပို့ဆောင်သူများ (ဆိုလိုသည်မှာ DHL၊ FedEx) သည် အချို့သော ဒေသ/နိုင်ငံများတွင် ကန့်သတ်ထားသော ရရှိနိုင်သော ပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ကုန်ကျစရိတ်များကို အတင်းအကြပ်အပြောင်းအလဲဖြစ်စေနိုင်သည်။ လိုအပ်သောအခါတွင်၊ သင်၏အမိန့်စာများကို လုပ်ဆောင်နေချိန်တွင် ပို့ဆောင်ခများပေါ်တွင် အတင်းအကြပ်ပြောင်းလဲမှုများရှိပါက သင့်ထံတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
အခါအားလျော်စွာ၊ ဒေသဆိုင်ရာ စိတ်ကြိုက်အာဏာပိုင်များသည် ကိုယ်ပိုင်နှင့် ကော်ပိုရိတ်အသုံးပြုသူများအတွက် ၎င်းတို့၏ တင်သွင်းမှုဆိုင်ရာ စည်းမျဥ်းများဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်/လိုအပ်ချက်အသစ်များကိုလည်း သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ Custom-related ပြဿနာများ (ဆိုလိုသည်မှာ တရားဝင်/တင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်မရှိခြင်းကြောင့် အကောက်ခွန်မှ ချုပ်နှောင်ထားသော အမှာစာများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ တာဝန်မကင်းပါ) နှင့် ပါဆယ်ထုပ်များကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပြန်လည်ပေးပို့ရပါက ပြန်လည်ပေးပို့သည့် ပို့ဆောင်ခအတွက် ဖောက်သည်များက ဆက်လက် တာဝန်ရှိနေမည်ဖြစ်ပါသည်။ .
ကျွန်ုပ်တို့၏စတိုးဆိုင်မှတဆင့် သင်ဝယ်ယူသောအခါ၊ ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ။
သင့်မှာယူမှုတွင် ဖော်ပြထားသော နောက်ဆုံးစျေးနှုန်း မထားဘူး စိတ်ကြိုက်အခွန်နှင့် အခွန်များပါဝင်သည် ။ သင် တာဝန်ရှိသည် မည်သည့်အကောက်ခွန်နှင့် VAT/အခွန်အတွက်မဆို (လိုအပ်ပါက)။
ကျေးဇူးပြု၍ မှန်ကန်သော ဆက်သွယ်ရန်နံပါတ်ကို ထည့်သွင်းပါ (ရေကြောင်းပါတနာများအတွက် မဖြစ်မနေ လိုအပ်ချက်တစ်ခု အားလုံး ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာအော်ဒါများ) မင်းရဲ့အမှာစာတွေကို ချောမွေ့စွာပို့ဆောင်နိုင်စေဖို့၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဤနေရာတွင်အသေးစိတ်။
ပုံမှန် Sorting ဈေးနှုန်းအနိမ့်အမြင့် စျေးနှုန်းမြင့်-အနိမ့် ခေါင်းစဉ် AZ ခေါင်းစဉ် ZA နောက်ဆုံးပေါ် အကောင်းဆုံး အဆင့်သတ်မှတ်ချက် Most Viewed
ကြည့်ရန်လှည်း ကုန်ပစ္စည်းကို သင့်လှည်းသို့ အောင်မြင်စွာ ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် $ 29.60
သင်၏ စျေးဝယ်လှည်းသို့ အောင်မြင်စွာ ထည့်ခဲ့သည်။
စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် $ 45.90
စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် $ 92.40
Options ကို Select လုပ်ပါ
စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် $ 65.00
စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် $ 98.00
Boost Immune (16 Ffervescent Tablets)
စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် $ 12.50
Boost Immune (48+16 Effervescent တက်ဘလက်)
စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် $ 32.90
Boost Immune (96 Ffervescent Tablets)
စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် $ 42.90
Cardio-Q အပေါင်း အီး
စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် $ 92.00
စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် $ 140.00
စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် $ 48.00
စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် $ 75.00
စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် $ 72.00
စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် $ 9.60
စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် $ 18.50
Crocodile Pure Skin Oil ၊
စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် $ 70.00
စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် $ 59.00
စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် $ 89.00
စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် $ 85.00
စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် $ 208.00
စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် $ 43.50
စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် $ 66.00
စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် $ 68.00
စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် $ 19.90
စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် $ 39.00
စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် $ 60.00
စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် $ 16.00
Hung Far ဆီ (Triple Pack)
စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် $ 15.80
စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် $ 62.00
စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် $ 55.00
စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် $ 88.00
စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် $ 135.00
Liver Gard Fort
စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် $ 45.00
စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် $ 67.00
Maxi-Cal 300mg (အထုပ်နှစ်လုံး)
Maxi-Cal အရည် (Twin Pack)
စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် $ 30.40
Melatonin5မီလီဂရမ်
စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် $ 18.00
Melatonin 5mg (အထုပ်နှစ်လုံး)
စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် $ 23.90
စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် $ 58.00
စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် $ 90.00
စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် $ 9.80
စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် $ 5.80
စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် $ 29.00
Rheuma-Salve® အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး 50g
Rheuma-Salve® အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး 50g x 6s တန်ဖိုးအထုပ်
စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် $ 53.00
Rheuma-Salve® နာကျင်မှုသက်သာစေသော ဗာလစံစေး ခရီးသွားအိတ် အရွယ်အစား
စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် $ 10.00
Rheuma-Salve® Patch (28s တန်ဖိုးအထုပ်)
စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် $ 15.50
Safflower Red Flower (Hung Far) ဆီ
စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် $ 6.20
စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် $ 92.65
ငါးမန်း အရိုးနု (Twin Pack)
စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် $ 139.00
စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် $ 35.00
UP-Lift Rhodiola ဖော်မြူလာ
UP-Lift Rhodiola ဖော်မြူလာ (Twin Pack)
စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် $ 5.90
စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် $ 29.90
Zhui Feng ဆီ
Zhui Feng ဆီ ( Triple Pack )
စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် $ 40.00
စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် $ 49.00
Zoo-Vite ဂျယ်လီချောင်းများ - ကယ်လ်စီယမ်
စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် $ 39.90
Zoo-Vite ဂျယ်လီချောင်းများ - DHA
Zoo-Vite ဂျယ်လီချောင်းများ - ကိုယ်ခံအား
Zoo-Vite ဂျယ်လီချောင်းများ - ဗီတာမင်စီ
Zoo-Vite Safari သူငယ်ချင်းများ
စုစုပေါင်း စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန် $ 0.00
ဝယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ Heritage® နှင့် Essentials® ထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။ TCM Clinic နှင့် ဆေးတိုက်.
ပြန်လည်ရောင်းချသူအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။
သင်ဟာ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်လား။ ပြန်လည်ရောင်းချသူအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ အစုလိုက်ဝယ်ယူပါ။
ပို့ဆောင်မှု၊ အခွန်များ၊ တာဝန်များ
ပို့ဆောင်မှု၊ အခွန်များ၊ တာဝန်များနှင့် အခကြေးငွေများ
နိုင်ငံတကာ မှာယူမှုများသည် ရောက်ရှိချိန်တွင် သင့်နိုင်ငံ၏ အကောက်ခွန်ဌာနမှ ကောက်ခံသော သွင်းကုန်ခွန်၊ အကောက်ခွန်နှင့် အခကြေးငွေများ ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း သုံးစွဲသူအားလုံးကို သတိပေးလိုပါသည်။ ပို့ဆောင်ခကို လက်ခံသူသည် ခရီးဆုံးနိုင်ငံ၏ ဥပဒေနှင့် စည်းမျဉ်းများအားလုံးကို လိုက်နာရမည့်အပြင် တင်သွင်းခအတွက်ပါ တာဝန်ရှိပါသည်။ အကောက်ခွန်မူဝါဒများသည် နိုင်ငံတစ်ခုနှင့်တစ်ခု ကျယ်ပြန့်စွာကွဲပြားသောကြောင့် ပိုမိုသိရှိလိုပါက သင့်ဒေသခံအကောက်ခွန်ရုံးသို့ ဆက်သွယ်ပါ။ သို့သော်လည်း သင့်ပါဆယ်ထုပ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပြန်ပေးရန်အတွက် အကောက်ခွန်နှင့် ဆက်သွယ်ထားသော ကယ်ရီယာဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။ အကောက်ခွန်မှ ငြင်းပယ်ထားသော ပစ္စည်းများကို ပစ္စည်းပို့ခြင်းအတွက် ပို့ဆောင်ခများ မပါဝင်ဘဲ ငွေပြန်အမ်းပါမည်။ သင့်ဝယ်ယူမှုအတွက် ပေးချေရန်အတွက် သင်အသုံးပြုသည့် မူလနည်းလမ်းအတိုင်း သင့်ထံမှရရှိသည့်ငွေအားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့ ပြန်အမ်းပါမည်။ အကောက်ခွန်မူဝါဒများသည် နိုင်ငံတစ်ခုနှင့်တစ်ခု ကျယ်ပြန့်စွာကွဲပြားသောကြောင့် ပိုမိုသိရှိလိုပါက သင့်ဒေသခံအကောက်ခွန်ရုံးသို့ ဆက်သွယ်ပါ။
ဒေတာ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့် စည်းမျဉ်းများ
ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာကာကွယ်ရေးနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒများကို ရှာဖွေပါ။ ဒီမှာ.
စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို တွေ့နိုင်သည်။ ဒီမှာ.
မူပိုင်ခွင့်® HST Medical Pte Ltd. ဤဆိုက်ရှိ အချက်အလက်များသည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ်၊ ရောဂါရှာဖွေခြင်း သို့မဟုတ် ကုသမှုအတွက် အစားထိုးရန် ရည်ရွယ်ခြင်း သို့မဟုတ် အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ စာသား၊ ဂရပ်ဖစ်၊ ရုပ်ပုံများနှင့် အချက်အလက် အပါအဝင်၊ ဤဝဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိ သို့မဟုတ် ရရှိနိုင်သော အကြောင်းအရာအားလုံးသည် ယေဘူယျအချက်အလက်များအတွက်သာဖြစ်သည်။ HST Medical Pte Ltd သည် ကိုယ်စားပြုခြင်းမပြုဘဲ ဤဝဘ်ဆိုက်မှတဆင့် ရရှိနိုင်သော သို့မဟုတ် ရရှိနိုင်သော အချက်အလက်များ၏ တိကျမှုအတွက် တာဝန်မရှိကြောင်းနှင့် ထိုအချက်အလက်များသည် အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ သင်သည် ဤဝဘ်ဆိုက်မှ သို့မဟုတ် အခြားရင်းမြစ်များမှတဆင့် ရရှိသော အချက်အလက်များကို အတည်ပြုရန်နှင့် မည်သည့် ကျန်းမာရေး အခြေအနေ သို့မဟုတ် ကုသမှုနှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်အားလုံးကိုမဆို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် သင့်အား တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။ ဤဝဘ်ဆိုက်တွင် သင်ဖတ်ရှုပြီး သို့မဟုတ် ဝင်ရောက်ခဲ့သော တစ်စုံတစ်ခုကြောင့် ဆေးဝါးကုသမှု ခံယူရန် နှောင့်နှေးခြင်းကို ဘယ်သောအခါမှ မရှုံ့ချပါနှင့်။ HST Medical Pte Ltd သည် တိကျသောစစ်ဆေးမှုများ၊ ထုတ်ကုန်များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ကုသမှုများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ထင်မြင်ယူဆချက်များ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများ သို့မဟုတ် ဤဝဘ်ဆိုက်တွင်ပါရှိသော သို့မဟုတ် ရရှိနိုင်သည့် အခြားအချက်အလက်များ၏ ထိရောက်မှု၊ သင့်လျော်မှု သို့မဟုတ် သင့်လျော်မှုအကြောင်း Pte Ltd မှ အကြံပြုခြင်း၊ ထောက်ခံခြင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်စားပြုမှုတစ်စုံတစ်ရာ ပြုလုပ်ခြင်းမပြုပါ။ . HST Medical Pte Ltd သည် ဤဝဘ်ဆိုက်မှတဆင့် သင်ရရှိသော မည်သည့် အကြံဉာဏ်၊ ကုသမှုသင်တန်း၊ ရောဂါရှာဖွေရေး သို့မဟုတ် အခြားအချက်အလက်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်များအတွက် တာဝန်လည်း မရှိပါ။
မူပိုင်ခွင့်® HST Medical Pte Ltd. ၏ အခွင့်အရေးများ လက်ဝယ်ရှိသည်။ နေအိမ် Rheuma-Salve Pain Relief Balm ၊ Zoo-Vite ကလေးဗီတာမင်၊ Cough AlievaidFluGard၊ Pearl Powder၊ Shou Wu နှင့် အခြားအရာများ။